Ikhalenda Lunar | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Isigaba Ikhalenda Lunar
Ukukhishwa kweklabishi lunarunwe ngo-Okthoba 2019
Esikhathini sekhalenda yenyanga, izigaba zezinyanga zenyanga zikhonjiswa, okungukuthi, izinguquko ekuqalisweni kwayo kwangaphandle, kuye ngokuthi ilanga likhanyisa kanjani izingxenye ze-satellite yomhlaba. Inyanga yamaLunar ihlala ezinsukwini ezingama-29-30 futhi iqukethe izigaba ezine zenyanga ezithinta abantu kanye nenkambo yezinqubo eziningi eplanethi yethu. Kukholelwa ukuthi, phakathi kwezinye izinto, kuthinta ukunambitheka kanye nekhwalithi yamalungiselelo ebusika, ikakhulukazi - i-sauerkraut.
Ifaka iklabishi yokulumbisa ekhalendeni yenyanga
I-Sauerkraut inamavithamini amaningi, anethonya elihle emaphethelweni omuntu wesisu. Isidlo silula ukulungiselela, kepha abesimame abanolwazi bayazi ukuthi ngokwekhalenda yenyanga kukhona izinsuku ezinhle kule nqubo. Pickles, kuvuna ngosuku olufanele, elihlwabusayo futhi eligcinwe isikhathi eside.
Ikhalenda Lunar Lokuhlwanyela Ngowezi-May 2019
Inyanga ngayinye yonyaka inezinsuku zayo ezinhle ezindabeni zezolimo futhi azikhuthazwa ukusebenza emhlabeni. Esikhathini esimisweni semisebenzi yomlimi wensimu engadini, ngoMeyi, 2019, kanye namathiphu ekhalenda yenyanga kanye nama-nuances okusetshenziswa kwawo, ngokuningiliziwe - kulesi sihloko. Umthelela weSigaba Senyanga Sokuhlwanyela Ukutshala Njengoba inyanga isondela noma ishiya eMhlabeni, insimu yayo yokucindezela ithinta i-biosphere yeplanethi yethu.
Ikhefu iklabishi ingafakwa nini ekhalendeni yenyanga ngoJanuwari 2019?
I-Sauerkraut noma iklabishi eqoshiwe iyisivakashi esivamile ematafuleni phakathi nenkathi ebandayo, ngoba ngaphandle kokunambitheka okubabayo futhi okubabayo, kunamaphilisi okuphulukisa futhi futhi kungumthombo wezinto eziningi eziwusizo namavithamini. Phakathi kwalabo abavame ukuhlanganyela eklabishi ye-salting, abaningi baxoxaniswa nekhalenda yenyanga, ngoba ngisho noma ulandela ubuchwepheshe obufanayo kanye ne-recipe, ungathola umphumela ohluke ngokuphelele.
Njengamanje, abalimi bazimisele ukubuyela ekhalendeni yenyanga, njengoba umqondo wezolimo ze-biodynamic usuthandwa kakhulu. Ukulima kwe-Biodynamic kusekelwe ekutshalweni kwezitshalo, lapho umlimi ethembela khona ngezigaba zenyanga. Ithonya le-satellite satellite phezu kwezimila liye labonwa ngabantu kusukela ezikhathini zasendulo, kodwa ngalesi sikhathi lesi sici sesivele sesifakazwe ngokwesayensi.
Okukhethekile kweklabishi ukuvutshelwa ngoNovemba ngokusho kwekhalenda yenyanga
I-Sauerkraut iyi-snack enempilo futhi enhle kakhulu. Umphumela omuhle uyatholakala uma ulandela ikhalenda yenyanga. Yiziphi izinsuku zikaNovemba ezithandekayo kakhulu ekukhethweni imifino, funda ngezansi. Kuhle kangakanani ukuvuna iklabishi ekhalendeni yenyanga? Okhokho bethu baqala ukusebenza ekuvuneni kwe-sauerkraut emva kuka-Okthoba 14 (umkhosi we-Intercession) ngokuhambisana nezigaba zenyanga.
Umlimi wekhalenda weLunar kaJanuwari 2019
Hlela umsebenzi wakho ngezimbali ngoJanuwari ngosizo lwekhalenda yezinhlamvu zenyanga. Kuzosiza ukuthola isikhathi sokuhlwanyela noma ukutshala izilimo zasendlini. Okuningi kulokhu - okuqhubekayo ku-athikili. Indlela izigaba zenyanga ezithinta ngayo izitshalo Ikhalenda yenyanga isitatimende esilula sezinyanga zenyanga phakathi nenyanga. Kukhona izigaba ezingu-4 ngokuphelele: inyanga ekhulayo, inyanga egcwele, inyanga ekhulayo kanye nenyanga.
Ikhalenda lokuhlwanyela kwama-lunar ka-2019 wesifunda saseMoscow
Ukuthola isitshalo sekhwalithi akunakuqinisekiswa ngaso sonke isikhathi ngamakhono nolwazi lomhlali wehlobo. Yingakho abalimi abanokuhlangenwe nakho bebheka ikhalenda yenyanga, esekelwe emithethweni yemvelo futhi ikwazi ukukhombisa izinsuku ezihle kakhulu hhayi ukutshala nokutshala izitshalo ezahlukene, kodwa futhi nokufakelwa kabusha kanye nezinhlobo ezahlukene zomsebenzi eziteshini, okuhlala njalo kuthinta umphumela wokugcina .
Ikhalenda lokuhlwanyela komlimi nomlimi wezitshalo zeBelarus ngo-2019 kuzosiza ekunqumeni kalula izinsuku ezinhle nezibi zokuhlwanyela izitshalo. Ziyini izigqi zenyanga, kanye nomthelela we-satellite Earth kumasiko - funda ngezansi. Yithonya kanjani izinyanga zenyanga ekukhuleni kwezitshalo Kukholelwa ukuthi imijikelezo yenyanga ithinta ukukhula nokuthuthukiswa kwezinhlobo zezitshalo.
Ikhalenda le-Lunno-lokuhlwanyela ngo-Disemba 2019
Ezingqondweni zabantu abaningi kakhulu, ngisho nalabo abanokuthile okuphathelene nokulima, ikhalenda yokuhlwanyela inyanga ngokuyinhloko ihlotshaniswa nezinyanga zasehlobo zasehlobo nasehlobo, ngoba okwamanje kwakukhona ukuthi indaba yokutshala isebenza (kunoma yikuphi, kubantu abahlala enyakatho yezwe) kubonakala kubalulekile.
Ikhalenda elihlwanyelayo lokuhlwanyela lomlimi wensimu ngoNovemba 2019
Ngokuqinisekile inyanga ithinta umhlaba. Ukukhangwa kwama-luna, okukwazi ukukhulisa nokunciphisa izigidi zamathani wamanzi olwandle, ukwakha ama-waves kanye nama-ebbs, kufana nokuthinta ngamandla konke ukuphila emhlabeni, kufaka phakathi izimila. Ikhalenda lokuhlwanyela inyanga isekelwe kulokhu, okuzoxoxwa ngakho kulesi sihloko.
Lapho iklabishi i-salting ekhalendeni yenyanga ngoDisemba?
I-Sauerkraut ingenye yezidlo ezithandekayo kakhulu ebusika. Ngaphandle kweqiniso lokuthi kunomusa omuhle kakhulu, kubhekwa njengomhlinzeki oyingqayizivele we-ascorbic acid, i-fibre nama-enzyme. Ukwenza iklabishi ikhiphe futhi isetshenziswe ngamanzi, abesifazana abaningi bayayivutha umkhiqizo ngezinsuku ezithile zekhalenda yenyanga.
Ukutshala ikhalenda ngo-2019 eSiberia kumgadi wensimu kanye nomlimi wensimu
Ukuze kuthuthukiswe izitshalo nezitshalo ze-horticultural ngokuphumelelayo, abalimi basebenzisa zonke izinhlobo zezindlela, kanti enye yazo ikhalenda yenyanga. I-Siberia ihlukile eqenjini eliphakathi hhayi nje ngesimo sezulu, kodwa futhi ngezigaba ezithile zenyanga, ngakho-ke, izazi zezinkanyezi zihlanganisa amakhalenda ahlukene kwabalimi baseSiberia, abalimi bembali nabalimi.
Ukutshala ikhalenda ngo-2019 kubalimi nabalimi
Abalimi abaningi abahlanganyela ekutshaleni imifino nezithelo, bahlwanyela, begxila ezinsukwini ezihle zekhalenda yenyanga. Futhi lokhu akumangalisi, ngoba ithonya leSatellite satellite kuzo zonke izilwane eziphilayo nezinqubo ezenzeka eplanethi kuye kwaziwa isikhathi eside. Indlela izigaba zenyanga ezithinta ngayo izimila, futhi uma kungcono ukwenza imisebenzi yezolimo - ngokuqhubekayo kulesi sihloko.
Ikhalenda lokuhlwanyela kwama-lunar yomgadi wensimu ngo-Agasti 2019
Abantu babesazi isikhathi eside mayelana nethonya lenyanga kukho konke ukuphila okuhlala emhlabeni wethu, futhi lapho behlela umsebenzi wabo wensimu, akuzange kumangalise ukuthi okhokho bethu abathintekayo ekukhuleni izitshalo zezolimo bazama ukugxila hhayi kuphela ezimweni zesimo sezulu, kodwa nangezigaba ze "nkanyezi encane". Ngokumangalisayo, ikhalenda yenyanga yokuhlwanyela ayizange ilahlekelwe ukuhambisana kwayo esikhathini sanamuhla sokuthuthukiswa okujulile kobuchwepheshe obusha nokutholakala kwesayensi.